Mitero yemitero inobata sei? | Ehupfumi Zvemari
Mitero yemitero inobata sei?
IUnited States Federal Reserve (Fed) yakasimudza mhindu yemitero nekota yechinongedzo kusvika pakati pakati 2,25% uye 2,5%, iyo iri pamatanho asingaonekwe mukati memakore anopfuura gumi musimba rinotungamira repasi rose. Uku ndiko kwekupedzisira kwekuwedzera kwechina kwaive kwakarongwa kuitwa nesangano muna 2018, kunyange hazvo yakaratidza kuti nhanho mu2019 ichave yakadzikama. Nekufungidzira kuti kune maviri kwete mana kuwedzera kunogona kugadzirwa panguva ino.
Idzi nhau dzave nemhedzisiro yakaipa kwazvo pamisika yemari, pamwe nekuderera kwakapararira mune ese mareti indices pasi. Nesimba risingaonekwe mumwedzi ichangopfuura, nekudonha pakati pe2% uye 3% uye uko index index yeSpanish stock stock, Ibex 35, yakamutungamira kuti aedze chikamu cheiyo 8.600 points. Imwe yetsigiro yakakosha iyo yainayo parizvino uye inogona kukurudzira, kana pakupedzisira ikaparadzwa, kuti iyo downtrend yakaiswa zvachose muSpanish square.
Izvi zvinoitika pamisika yemari zvinoratidza kukosha kwezvibereko mumisika yemasheya kutenderera pasirese. With kuita kwakanyanya, mune imwe pfungwa kana imwe, zvinoenderana nekushanduka kweiyi yakakosha paramende yezvehupfumi. Kusvika padanho rekuti vashoma uye vepakati varimi vanofunga kuti shanduko yemitero inokanganisa sei zviitiko zvehupfumi uye, zvakanyanya, hukama nenyika inogara yakaoma yemari nekudyara.
1 Zvibereko zvepamusoro
2 Zvikwereti zvinodhura
3 Mhedzisiro pamisika yemari
4 Mari yekubatsira
5 Forex Kusimbisa
6 Chimbadzo mudunhu reyuro
Kana isu tikashandisa sarudzo neFederal Reserve yeUnited States kukwidza, kunyangwe zvishoma nezvishoma, mitengo yemubereko, zvinobatsira kuziva kuti vashandisi vese vangangokanganiswa sei. Zvakanaka, kuwedzera kweiyi paramende yezvehupfumi zvinoreva pamusoro pezvose a inoshanda zvakanyanya kudzora mutengo yezvigadzirwa uye zvinhu zvinowanikwa. Mune mamwe mazwi, inflation inowanzo tenderera kudzika muzviitiko izvi uye nekudaro kune hukuru hukuru pamitengo. Mhedzisiro inonyanya kuitika ndeyekuti mutengo wehupenyu hauitike neicho chakafanana.
Kune rimwe divi, chinhu ichi chinokurudzira kushandiswa pakati pevashandisi kuve kwakakwirira uye kunobatsira kukura kwehupfumi hwenyika pamusoro pezvimwe zvekufunga kwehunyanzvi. Naizvozvo, ichi chingave chimwe chezvinhu zvakanaka kwazvo zvekuita mukukwira kwezvibereko. Nekuti iri mushure mezvimwe zvezvinangwa zve hurumende dzepasi rese paunenge uchigadzira yako hupfumi mutemo. Sezvakaratidzwa mumakore achangopfuura uye kunyanya mushure mekuvandudzwa kwedambudziko rekupedzisira rehupfumi, pakati pa2007 na2009.
Pane kupesana, imwe yeanotyisa mhedzisiro yekukwira kwemitero ndeyekuti mitsara yemari vanowedzera kudhura, zvese zviri pakati pevanhu nemakambani. Kwete zvisina maturo, zvichave zvakafanira kupira simba rakakura rezvehupfumi mune amortization uye nguva dzose zvichienderana nekusimba kwekuwedzera uku. Zvinogona kuve kubva pagumi chegumi kusvika kune akati wandei poindi poindi mukufarira izvo zvikwereti zvikwereti zvinoshanda kune avo vatengi Izvo zvinokanganisa kuti huwandu hwemari huri mukutenderera idiki uye mupfungwa iyi inogona kukanganisa zvakanyanya kukura kwakanaka kwekushandisa.
Izvi mukuita zvinoreva kuti kana paine kukwira kwemitero, mabhanga anokurumidza kuongorora mamiriro avo ekubvumirana. Kukwidza huwandu hwezvibereko zvezvigadzirwa zvavo uye mune dzimwe nguva zvakare mu makomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kwayo kana kugadzirisa. Kubva pane ino maonero, kuita kwemari uku hakusi kunakira izvo zvido zvevatengi vanozoona kuti vachatorera sei zviwanikwa zvemari mukumisikidza chero mutsetse wechikwereti.
Mhedzisiro pamisika yemari
Kusvika padanho rakakura kana shoma, zviito zvemari izvi zvinokanganisa misika yequity kutenderera pasirese. Uye zvechokwadi haina kunaka, sezvo zvave zvichikwanisika kuongorora mazuva ano mushure mekukwira kwechiyero chitsva neFederal Reserve yeUnited States. Nekuti mabhegi anogamuchira chiyero ichi zvakakwana inoderera mumitengo yezvivimbiso yakanyorwa pamisika yemari. Nesimba iro dzimwe nguva rinonyanya kutaurwa uye rinogona kuwedzeredzwa. Asi uyu ndiwo mutemo unowanikwa pakati pevatengesi pasi rese.
Kunyangwe pane izvo zvinopesana, kukwira kwenzvimbo yemubereko kunotambirwa neimwe nzira nemisika yakatarwa yemari, inova ndivo vanobatsirika zvikuru pachiyero ichi. Chero zvazviri, iwe uchafanirwa kunyatsoteerera kune ese aya marudzi ekufambisa kuitira kuti ongorora yedu yekudyara portfolio kana kuchengetedzwa. Uye kana zvichidikanwa kuti zvisiyane zvichienderana neshanduko idzi muhurongwa hwemari yehurumende. Nekuti hazvigone kukanganwika kuti kusaenzana kwakasimba kunogona kuitika mavari. Sezvo zvichange zvaitika kwauri pane kanopfuura kamwe chiitiko neako mazimari.
Naizvozvo, mumwe wevabatsiri vakakura pachiyero chekukwiridzira zviyero zvemubhadharo pasina mubvunzo anozosaver. Nechikonzero chiri nyore kwazvo chekutsanangura uye icho chinovakirwa pachokwadi chekuti zvese zvigadzirwa zvakagadzirirwa kuchengetedza zvinowedzera mukuita kwavanopa kune avo vanobata. Semuenzaniso, mu yakatarwa-temu bhangi dhipoziti, emakambani ekuvimbisa manotsi kana kunyangwe mune yakakwira-goho kana akawandisa akaundi maakaundi. Mhedzisiro yazvino, inova kufarira kwako, inomuka nekukurumidza zvakanyanya zvichienderana nekuwedzera kune ruzivo.
Izvi zvinobatsira vanhu kuti vave nemari yakawanda muaccount yavo uye vane pundutso mukuwedzera kwekushandisa pamusoro pezvimwe zvinhu zvehunyanzvi. Nguva dhipoziti inogona kusimuka zvakakwana mune ino mamiriro ekushandisa avhareji uye yegore kufarira 1% kusvika 1,50% kana zvakaenzana zvakafanana. Naizvozvo, mari inofamba ichienda kune yakamisirwa mari kukuvadza maquity. Iko kune nekudaro kuendeswa kwekuyerera kwemari pakati pezvinhu zvese zvemari izvo zvinonyanya kufadza kudzidza uye kuongorora mune zvimwe zvakanyatsotsanangurwa zvinyorwa paiyi maitiro munyika yemari.
Imwe yemhedzisiro yakanaka yekukwira kwemitengo ndeyekuti inogadzira kuwedzera kwemari yakabatika. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti mushure mesarudzo yeUnited States Federal Reserve kukwidza mwero wayo wemubereko, pakave nekusimbiswa kwekukurumidza kwemari yayo. Ndizvozvo, uye kuti uzvinzwisise zvirinani kubva zvino zvichienda mberi, dhora rinowedzera mutengo waro. Izvi zvinokanganisa kugona kwako kutumira kunze, sezvo kutenga zvinhu zveUS kuchadhura kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, zviri nyore kwazvo kuongorora chimwe chinhu chinorehwa neichi chiyero chemari chakakosha uye chiri icho chine chekuita nekuitwa kunoitwa mumisika yekudyidzana nedzimwe nyika. Sezvo, zvinoenderana nekushandisa kwayo, iyo mari inogona kuitwa purofiti zvichienderana nemari dzinosimudzirwa neichi chitsva chemari mamiriro. Iri izano rekutanga iro vashoma uye vepakati varimi vane ruzivo rwakawanda mune irwu rudzi rweakakosha mashandiro anga achivandudza. Hazvishamisi kuti ivo vanopa iyo zvikuru purofiti uchienzaniswa nemamwe emari midziyo yakakosha kukosha.
Chimbadzo mudunhu reyuro
Nezve iyo euro zone mamiriro ezvinhu epanguva yacho akasiyana zvakanyanya neAmerican. Izvi zvinokonzerwa nekuti mamiriro ehupfumi akasiyana uye, mupfungwa iyi, dhipatimendi rekuongorora rinonongedza kuti "mune chero mamiriro ezvinhu, ivo vanoramba vari pamatanho epamusoro, izvo zvinobvumidza kuvimba mukuenderera kweichi chiitiko chinotenderera. Yedu kukura kwekufungidzira kwegore ra2018 ikozvino + 2,0% ichienzaniswa ne + 2,1% kare, uye + 1,8% muna 2019 zvichienzaniswa ne1,9% kare ”.
Kune rimwe divi, ivo vanofunga kuti "isu hatitarisiri kuti ECB ichinje nzira yayo. Iko kutenga kweaseti (15.000 mamirioni euros / mwedzi) ichazopera muna Zvita. Kunyangwe kupera kweQE, mutemo wezvemari ucharamba uchigadziriswa, kuburikidza nekudzoreredzwa kwehukuru uye kutungamira kwekutungamira pamitero yemitero ”. Hazvishamisi kuti ivo vanopa iyo zvikuru purofiti uchienzaniswa nemamwe emari midziyo yakakosha kukosha.
Mune mamwe mazwi, ndiwo mamiriro ezvinhu achine nzira refu yekufamba sezvo vachitenda kuti "chimbadzo, tinofunga kuti kuwedzera kwekutanga kunogona kuve munaGunyana / Gumiguru mune dhipoziti, kubva pane yazvino -0,4%. Draghi anopedza temu yake muna Gumiguru uye nekudaro anovhurira nzira yekumisikidzwa mumitengo ”. Chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chinokanganisa chikamu chakakura chevashambadzi vadiki nepakati vanozove vanoziva chaizvo zvinogona kuitika mumutemo wenzvimbo kuti vagadzire mamwe marongero ekuvandudza mari yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mitero yemitero inobata sei?
Kuputsika kwemusika wemasheya pakupera kwegore
Magetsi anopinda muchikamu chemotokari yemagetsi